'मेरो नामले पानीपुरी बिक्दो रैछ' | rochak nepali khabarside
Entertaiment Feature InterViews
'मेरो नामले पानीपुरी बिक्दो रैछ'
अभिनेता अनमोल केसी नेपाली फिल्ममा 'स्टार'का रूपमा उदाउन थालेका छन् । फिल्म 'होस्टेल' बाट डेब्यू गरेका उनले सफलतामा ह्याट्रिक गरेका छन् । अघिल्लो हप्ता रिलिज 'ड्रिम्स'मा त उनको स्टारडम प्रस्ट देखियो । फिल्मले अग्रिम बुकिङमा रेकर्ड राखेको बताइन्छ । अत्यधिक फ्यान फलोइङका कारण उनी हलमा जाँदा बडिगार्डसहित पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । उनीसँग डिबी खड्का र अनिल यादवले गरेको अन्तरंग कुराकानीः
अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली कलाकारले बडिगार्डको सुरक्षासहित हलमा पुग्नुपरेको थिएन । तर, तपाईंलाई त्यो अवस्था आयो । स्टार भएको महसुस भइरहेको होला ?
मेरा प्रशंसक धेरै छन् । सबै मसँग झ्याम्मिन चाहन्छन् । भीडमा जे पनि हुन सक्छ भनेर बडिगार्ड लिइएको हो । अर्काे, मेरो कुरा काट्ने र कुभलो चिताउने पनि बढेका छन् । त्यसैले सुरक्षाबिना हलमा पुग्दा जे पनि हुन सक्छ भनेर बडिगार्डको व्यवस्था गरियो । आफू स्टार भएको भन्दा पनि फिल्म हेर्ने दर्शक बढेको अवस्था हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
अब मनमौजी बाहिर हिँड्ने स्वतन्त्रतासमेत रहेन तपाईंसँग !
त्यो समस्या त आइसक्यो । म सधैँ क्याप र मास्क लाएर हिँड्छु । तर, पनि कहिलेकाहीँ प्रशंसकले चिनिदिन्छन् । कलाकार भएपछि पर्सनल लाइफ जिउन गाह्रो हुँदो रहेछ । त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो त लाग्छ तर म चित्त बुझाउँछु । किनकि, म पनि अब 'पार्ट अफ पर्सेन्ट अफ सेलिब्रिटी' भइसकेँ । दर्शकको मायालाई समस्या ठान्नु हुन्न भनेर मन बुझाइसकेँ।
दर्शकले त राम्रै ठानेर हेर्न आउँछन् तपाईंलाई । तेस्रो फिल्म 'ड्रिम्स'सम्म आइपुग्दा आफूले आफूमा के कमजोरी भेट्नुभयो ?
म अहिले 'ग्रोइङ फेज'मा छु । सबै कुरा बुझेको छैन । एउटा फिल्म हलमा लाग्दा अर्को फिल्मको सुटिङ सकिसकेको हुन्छ । जस्तो 'गाजलु' सकिँदा हलमा बल्ल 'ड्रिम्स' रिलिज हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा आफूले अभिनय गरेको फिल्म हेर्दा म सधैँ आफ्नो अभिनयलाई अपरिपक्व ठानिरहेको हुन्छु । अझ राम्रो गर्न सकिने रैछ भन्ने लाग्छ ।
आफ्ना कमजोरीमा सुधार ल्याउन के–के गर्दै हुनुहुन्छ त ?
हरेक फिल्मको सफलतापछि कलाकारमाथि चुनौती पनि थपिरहेको हुन्छ । मेरो हकमा पनि 'अडियन्स एक्सपेक्टेसन' बढिरहेको छ । त्यही भएर अब आफ्नो अर्काे फिल्ममा कसरी धेरै राम्रो गर्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छु । अभिनय कक्षा लिने मनस्थितिमा छु । एक्टिङ वर्कसप, फिटनेस, डान्स क्लब सबै ज्वाइन गर्ने तयारीमा छु । मैले कहिल्यै पनि आफूलाई पर्फेक्ट ठानेको छैन । म फस्ट क्लास अभिनय गर्न सक्दिनँ । दर्शकले यति चाँडै माया गरिदिए, स्टार भनिदिए । उनीहरूले स्टार भने पनि ममा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ ।
तपाईंलाई दर्शकले मन पराउनुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
मलाई त मन पराउनुको कारण मेरो फिल्म नै हो । यसमा मेरो 'गुड सेन्स अफ स्क्रिप्ट' को भूमिका पनि छ । लुक्सका कारण चाहिँ होइन । किनभने, मभन्दा ह्यान्डसम केटाहरू धेरै छन् । म त्यस्तो ह्यान्डसम छु जस्तो लाग्दैन ।
प्रशंसा गर्नेभन्दा पनि 'रियल फिडब्याक' दिनेहरूले के–के भन्छन् ?
'ड्रिम्स' रिलिज भएपछि ताल–तालका प्रतिक्रिया पाएँ । साँच्चीकै मलाई फिडब्याक दिनेले 'एक्टिङ सिक्नुपर्छ' भने । म त्यो सुझावलाई मनैबाट स्विकार्छु ।
'ड्रिम्स'मा तपाईंले अघिल्ला फिल्ममा दर्शकले दिएको कुन प्रतिक्रियालाई कार्यान्वयन गर्नुभयो ?
धेरैले अनमोलले एक्सन गर्दैन र गर्न सक्दैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यो फिल्ममा मैले त्यो पनि गरेर देखाइदिएँ ।
एक्सन गर्न कत्तिको दुःख गर्नुपर्यो ?
ओहो ! दुःख त बाफ रे, कति भयो कति । कुरै नगरौँ । शरीर पूरै नीलो हुनेगरी दुःख गरिएको छ । बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको सुटिङ भोलिपल्ट बिहान ११ बजेमात्र सकिएको थियो । त्यतिबेरसम्म लगातार पानीमा भिज्दै सुटिङ गर्दा के भयो होला ? मलाई त बिरामी हुन्छु जस्तो लागेको थियो । अर्काे, नेपालमा एक्टरलाई एक्सन गर्न रिस्क पनि छ । भन्याजस्तो प्रोटेक्सन हुँदैन । 'होस्टेल'को सुटिङमा मैले फ्लाइङ किक खाँदा मेरो घाँटीमा चोट लागेको थियो । तीन दिनसम्म खाना निल्न सकेको थिइनँ । किक खानुभन्दा अघि प्याड लगाउनुपर्ने, खाइसकेपछि लगाइदिनुभएको थियो । हाँसो पनि उठेको थियो ।
तपाईंको घरवरिपरि फ्यानको भीड लाग्थ्यो । अहिले अलि कम भएको हो ?
त्यो भीडको रहस्य अर्कै छ । मेरा लागिभन्दा पनि आफ्ना लागि कसैले भीड जम्मा गर्ने रहेछ । खासगरी मेरो घरअगाडि पानीपुरी पसल छ । त्यहाँ धेरै युवायुवती आउँछन् । मेरो नामले पानीपुरी बिक्दो रैछ । पसलेले 'अनमोल बस्ने घर यही हो । यो बेला आउनू, भेट्न सकिन्छ' भन्दा रहेछन् । यही मौकामा पानीपुरी बेच्दा रहेछन् । आफूले त्यस्तो भन्ने गरेको भनेर उनले मलाई बताए । म पनि मेरो नाम लिँदा उनको पसल चल्छ भने राम्रै हो भनेर खुशी छु ।
तपाईंलाई भेट्न पनि त आइरहेका हुन्छन् नि फ्यान ?
धेरै आउँछन् । अस्ति भर्खर दार्जिलिङबाट आठनौजना केटीको ग्रुप नै आएको थियो । त्यत्रो टाढाबाट आएपछि म पनि भेट्न गइदिएँ । मलाई यसरी नै डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट रूपमा एक दिन सबै फ्यानसँग भेट्न सकूँ भन्ने लाग्छ । अचेल मेरो जस्तै हातमा ड्र्यागनको ट्याटू खोप्ने फ्यान पनि भेटँे । कतिपय ट्याटू सेन्टरकाले त मलाई भिडियो नै खिचेर पठाइदिएका छन् । केटाहरूले त्यस्तो ट्याटू खोप्दा त केही लागेको थिएन, केटीले पनि खोपेको भन्दा चाहिँ अचम्म लागेको थियो ।
कहिले बनाउनुभएको हो ट्याटु ?
एसएलसी सकेपछि बनाएको हुँ । पाँच वर्षभन्दा बढी भयो । चीनमा यसलाई रोडेक्सको चिन्ह मानिन्छ । यसले नेगेटिभ इनर्जीलाई खाइदिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
तपाईंलाई आर्टमा कत्तिको रुचि छ ?
म बुकवर्मभन्दा पनि 'आर्ट गाय' नै हो । सानैदेखि म पढाइमा मध्यम भए पनि आर्टमा अघि नै हुन्थँे । म्युजिकमा रुचि थियो । किबोर्ड, ड्रम, गिटार आदि बजाउँछु ।
घरमा पनि थुप्रै 'न्युड' मूर्र्ति सजाएर राखिएको रहेछ । तपाईंले नै हो ?
होइन । यो त सब ड्याडको हो ।
तपार्इंलाई आफ्नो बुबाको सबैभन्दा बढी के कुरा मन पर्छ, जुन तपाईं अनुशरण गर्न खोज्नुहुन्छ ?
उहाँको लगाव र योगदान । उहाँको नाम आउनेबित्तिकै नेपाली फिल्म क्षेत्रको कुरा जोडिन्छ नै । उहाँले जस्तै म पनि यो क्षेत्रका लागि सधैँभरि योगदान पु¥याउन सकूँ भन्ने लाग्छ । नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने र पुर्याउने उहाँको सपना थियो । त्यसलाई पूरा गर्ने लक्ष्य पनि छ मेरो ।
तपाईंलाई चाहने त धेरै छन् । आफूले चाहेको पनि कोही होला ?
मलाई चाहने फ्यानहरूलाई म फ्यानकै रूपमा लिन्छु । अहिले म मैले चाहेको कस्ती हो ? भन्ने नै बुझिरहेको छैन । एउटालाई चाहँुला तर ऊसँग निकट हुँदै जाँदा मैले चाहेजस्तो नभएपछि सम्बन्ध बिग्रिएला । फेरि, अर्काेसँग त्यस्तै होला । अनि, अनमोलले केटी फेर्दै हिँड्छ भन्ने आरोप लाग्ला । यही कुरादेखि डराएर म त्यतातिर सोच्न डराइरहेको छु । ३५ वर्षको उमेरसम्म त्यतातिर नसोच्ने योजना छ ।
त्यो त बढी नै भएन र ?
केको बढी ? खासमा त ४० वर्षसम्म हो । अलि घटाएर भनेको हुँ । अहिले त मसँग मलाई कस्तो केटी चाहिएको हो भन्ने प्र्रश्नको जवाफ नै छैन । म अलि फरक प्रवृत्तिको केटा हुँ । मलाई प्रेम गरेपछि जीवनभर एउटैसँग मात्र गरौँ भन्ने लाग्छ ।
हिरो भएपछि पहिरन पनि राम्रै लाउनुपर्ने होला । कसरी छान्नुहुन्छ तपार्ईं ?
म लुगा राम्रोभन्दा पनि लाइसकेपछि राम्रो देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरामा ख्याल गर्छु । मलाई अँध्यारो रङको पहिरन बढी मन पर्छ । जस्तै, कालो र ग्रे ।
झन् ह्यान्डसम बन्न के–के गर्नुहुन्छ ?
बुबाजस्तै छु । बिहान ९–१० नबजी बेडबाट उठ्दिनँ । स्ट्रेचिङ चाहिँ गर्छु । खानेकुरामा त अरूले जे खान्छन्, त्यही नै खाने हो । त्योबाहेक खाने भनेको फलफूल हो । त्यस्तो ख्याल गरेर खाने गरेकै छैन । चकलेट भेटे चकलेट नै खाइदिन्छु । मन पर्ने जे भेटे पनि खाइदिएकै छुु ।
'ड्रिम्स' रिलिजको अघिल्लो रात तपाईं स्वयम्भूको दर्शन गर्न पुग्नुभयो रे !
हो । मलाई भगवान्प्रति विश्वास छ । दिउँसो चाहेर पनि जान सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यही भएर राति कुन मन्दिर खुला हुन्छ, त्यहीँ जान्छु भन्ने सोच थियो । यसैले रातको ११ बजे स्वयम्भू पुगेँ । राति बाँदर, कुकुर धेरै थिए । तर, डराइनँ । भगवान्को ठाउँमा त के नराम्रो होला र ? भन्ने लाग्यो । भोलिपल्ट बिहान फिल्म हेर्न दर्शक कत्तिको आउने हुन् भन्ने चिन्ता मनमा थियो । भगवान्लाई अहिलेसम्म जे दिनुभा'छ, त्यो पाइरहूँ भनेर मागेको थिएँ ।
स्क्रिप्ट छान्दा के कुरामा ध्यान दिइन्छ ?
पहिलो कुरा त क्यारेक्टर नै हो । मेरो क्यारेक्टर कस्तो छ र म त्यसलाई निर्वाह गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरामा सर्वप्रथम ख्याल गर्छु । दोस्रो कुरा, सपोर्टिङ एक्टर को छन् र उनीहरूको भूमिका कस्तो खालको छ भन्ने कुरा विचार गर्छु ।
अहिलेसम्म तपाईंका फिल्म हेर्दा अभिनयमा विविधता त देखिएन । भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?
मैले अहिले भिन्न–भिन्न भूमिका निर्वाह गर्न नखोजेकै हुँ । प्रियंका चोपडाले सुरुमै 'मेरी कोम'मा अभिनय गरेको भए के हुन्थ्यो ? शाहरुख, सलमानले पनि सुरुमा उस्तै प्रकारको फिल्ममा अभिनय गरेर चिनाएका हुन् । मैले अहिले भूमिका परिवर्तन गर्ने बेला भइसक्यो जस्तो लाग्दैन । जब म आधा दर्जनजति हिट फिल्म दिइसक्छु, मेरो टाइपको फिल्ममा जमिसक्छु, त्यसपछिमात्र अन्य प्रकारका फिल्ममा काम गर्छु ।
आगामी फिल्म 'गाजलु'मा पनि दर्शकले अनमोललाई फरक नपाउने भए !
त्यो फिल्ममा त अहिलेसम्म देखिएभन्दा चाहिँ फरक खालको भूमिकामा छु । अहिलेसम्म धनाढ्य परिवारको केटाका रूपमा अभिनय गरेको छु । तर, 'गाजलु'मा चाहिँ गरिब परिवारको युवाको भूमिकामा छु ।
Labels: Entertaiment Feature InterViews